U-Bartlett Utusa I-Bahia Principe kuMphathi Wezwe Wokuqala Omusha Wase-Jamaica
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJamaica » U-Bartlett Utusa I-Bahia Principe kuMphathi Wezwe Wokuqala Omusha Wase-Jamaica
UNgqongqoshe Wezokuvakasha uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett ubingelela iMenenja entsha yezwe lase-Bahia Principe u-Brian Sang (kwesokudla), kanye noMphathi Omkhulu Wezokusebenza u-Antonio Teijeiro. Lesi senzakalo bekuwucingo lwezilokotho lwabaphathi bethimba labaphathi be-Bahia Principe emahhovisi kaNgqongqoshe eNew Kingston ngoJanuwari 11, 2022. Isithombe sihlonishwa yi-Jamaica Ministry of Tourism
Ihhotela elikhulu kunawo wonke e-Jamaica, i-Bahia Principe, limemezele ukuqokwa kukaBrian Sang njengoMphathi walo wokuqala wezwe lase-Jamaica. Lezi zindaba zemukelwe nguNgqongqoshe wezokuVakasha uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett ophawule ukuthi lesi simemezelo sihambisana nenhloso yoMnyango wakhe wokuba nabantu abaningi base-Jamaica ezindimeni zobuholi kulo mkhakha.
“Kungithokozise kakhulu ukuzwa ukuthi iBahia iqoke umuntu waseJamaica njengoMphathi wabo omusha wezwe. Lokhu kuyingxenye ebalulekile yogqozi oluqhubekayo lwezabasebenzi ebesiwukhuthaza eMnyangweni Wezokuvakasha, ukuze siqinisekise ukuthi abantu baseJamaica abaningi ngangokunokwenzeka bazoba sesikhundleni sobuholi kulo mkhakha,” kusho uBartlett.
“Ngimamukela ngenhliziyo yonke uMnu. Sang futhi ngimfisela isikhathi esiyimpumelelo, esiqala onyakeni we-15 wale nkampani e-Jamaica,” wengeza.
UNgqongqoshe ukusho lokhu ekuqaleni kwanamuhla, ngesikhathi enomhlangano emahhovisi akhe eNew Kingston. Phakathi nezingxoxo nabaphathi basehhotela, waphinde wagqamisa umsebenzi obalulekile owenziwa yi-Jamaica Centre of Tourism Innovation (JCTI) wokuqeqesha abasebenzi bokwamukela izivakashi ukuze bahlangabezane kangcono nezidingo zomkhakha, kuyilapho ebafanelekela ukugcwalisa izindima eziningi zobuholi.
“Njengengxenye yokuzibophezela kwethu ekwakheni abantu base-Jamaica, sisungule uphiko lokuqeqesha olubizwa nge-JCTI, esenze umsebenzi omuhle kakhulu wokuvumela ukuqeqeshwa kanye nezitifiketi zabasebenzi bemboni yezokuvakasha,” kusho u-Bartlett.
“Lokhu kubalulekile ukuze imboni yethu yezokuvakasha iqhubeke nokukhula kanye nokuncintisana.”
I-JCTI iyingxenye yeSikhwama Sokuthuthukisa Izokuvakasha (TEF), okuwuhlaka lukahulumeni loMnyango Wezokuvakasha. Selokhu kwaqala lolu hlelo eminyakeni emine edlule, bangaphezu kuka-8,000 Ezokuvakasha zaseJamaica abasebenzi bathole izitifiketi zobungcweti. Lokhu kwenziwe kwaba nokwenzeka ngokusebenzisana kwamasu kanye ne-Human Employment and Resource Training/National Service Training Agency Trust (HEART/NSTA Trust), Universal Service Fund (USF), National Restaurants Association (NRA), kanye ne-AHLEI. Njengamanje, abafundi abangama-45 balungiselela ukuthola izitifiketi zabo zobuciko bokupheka ezihlinzekwa yi-American Culinary Federation (ACF).
Umhlangano ubuhanjelwe yizikhulu eziphezulu zezokuvakasha, kanye nethimba elivela e-Bahia Principe Resort, okuhlanganisa noMphathi Omkhulu Wezokusebenza, u-Antonio Teijeiro; Umqondisi Omkhulu Wokuthuthukiswa Kwamahhotela Nokusungula, uMarcus Christiansen; Umphathi Wezwe ophumayo, u-Adolfo Fernandez; Umqondisi Wenhlangano Yamazwe Ngamazwe kanye Nomthwalo Wemfanelo Womphakathi Webhizinisi, u-Fabian Brown; kanye noMphathi Wezwe osanda kuqashwa, uBrian Sang.
U-Sang ujoyina i-Bahia kulandela uchungechunge lwezikhathi eziyimpumelelo nezinkathi eziphawulekayo ezimbonini zamahhotela, ezokuvakasha, nezokuphatha izihambi. Iqhaza lakhe lakamuva lokuhola kwaba yi-Cluster General Manager yeBlue Diamond Resort e-St. Lucia.
Umqondisi ophumayo, u-Adolfo Fernandez, uthathe indima entsha eSpain eqenjini ngoJanuwari 6, 2022.
I-Bahia Principe Hotels & Resorts iyingxenye ye-resort ye-Grupo Piñero eyaqala ukusebenza ngo-1995 ngehhotela layo lokuqala e-Rio San Juan ogwini olusenyakatho ye-Dominican Republic. Uchungechunge lwamahhotela e-Grupo Piñero e-Bahia Principe nalo linezindawo e-Riviera Maya e-Mexico nase-Spain e-Canaries nase-Balearic Islands.
UBONE ESITHOMBE: UNgqongqoshe Wezokuvakasha uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett ubingelela iMenenja entsha yezwe lase-Bahia Principe u-Brian Sang (kwesokudla), kanye noMphathi Omkhulu Wezokusebenza u-Antonio Teijeiro. Lesi senzakalo bekuwucingo lwezilokotho lwabaphathi bethimba labaphathi be-Bahia Principe emahhovisi kaNgqongqoshe eNew Kingston ngoJanuwari 11, 2022. Isithombe sihlonishwa yi-Jamaica Ministry of Tourism